नेपाल–भारतबीचको औपचारिक सम्बन्धले ७० वर्ष लामो समय पार गरेको छ । अनौपचारिक सम्बन्धका हिसाबले नेपाल–भारतबीच शताब्दीऔँ अघिदेखि सम्बन्ध रहँदै आएको छ । दुई देशबीचको परम्परागत सम्बन्ध र पारस्परिक हितको विषय सधैँ चर्चामा रहनु स्वाभाविक हो । दुई देशबीच बेलाबखत सम्बन्धमा उतारचढाव हुँदै आएका छन् । तिक्ततापूर्ण सम्बन्धको अनुभूति पनि ताजै छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध सुधारको विषयले विशेष चर्चा पाएको छ । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, भारतका लागि पूर्व राजदूत, परराष्ट्र मामिलाविज्ञ डा. भेषबहादुर थापासँग नेपाल–भारत सम्बन्धका विविध सन्दर्भबारे गोरखापत्रका उपसम्पादक लक्की चौधरीले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षेप :
 प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शुक्रवारदेखि हुनलागेको तीनदिने भ्रमणलाई विगतका केही वर्षमा भारत–नेपालका सम्बन्धमा भएका गतिविधिलाई ध्यानमा राखेर कुरा गर्नुपर्छ होला । नेपालको संविधान जारी भएपछि जे–जस्ता संवाद दुई देशबीच भए । अनि त्यसपछि भएका घटनालाई हेर्दा सम्बन्धमा अप्ठ्यारोपन देखिएको मात्र होइन, संवाद नै रोकिएको स्थिति थियो । भारतीय नाकाबन्दीका कारण नेपाली जनता दुःख पाए । हालै सम्पन्न चुनावबाट नेपाली जनताले स्पष्ट जनादेश दिए । संविधानअनुरूप प्रक्रियाको थालनी पनि भएको छ । सम्बन्ध सुधारका लागि बलियो आधार खडा नहुन्जेल नेपालीले दुःख त पाउलान् तर आत्मसमर्पण गर्दैनन् भन्ने अभिव्यक्ति चुनावी मतमा देखियो । यसको अनुभूति भारतले पनि ग¥यो । नेपालीसँग सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्छ भन्ने चेत भारतलाई अहिले आएको छ । भारतले छिमेकीप्रतिको नीतिलाई अहिले प्राथमिकता दिएको छ । नयाँ मोड दिने प्रयास भइरहेको छ । भारतले आफ्नो लक्ष्यप्राप्ति गर्न पनि छिमेकीसँग सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्ने यथार्थलाई राम्रोसँग बुझेको छ । त्यसैको परिणामस्वरूप अहिलेको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई निकै प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । सम्पर्कको नयाँ आधार शुरुवात गर्न खोजिएको छ । यी सबै कुरालाई हेर्दा भारतले नेपालसँग सम्बन्धमा नयाँ आयाम दिन खोजेको अनुभूति हुन्छ । मलाई लाग्छ, प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणबाट दुई छिमेकी बीचको सम्बन्धमा नयाँ अध्याय शुरु हुनेछ ।
 नेपाल–भारतबीचको पछिल्लो तिक्तताको उपज नेपालको नयाँ संविधान मात्र हो कि, अरू केही कारण देख्नुहुन्छ ?
 प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको मुख्य प्राथमिकता के हुनुपर्छ लाग्छ ?
सामान्य कूटनीतिक प्रक्रियाको उपज हो, घरभित्र बलियो भएमा मात्र छिमेकीले पनि आदरको दृष्टिले हेर्छ । हामी बलियो भएमा छिमेकीले पनि महŒव दिन्छ नै । अहिले केपी शर्मा ओली बलियो प्रधानमन्त्रीका रूपमा आउनु भएपछि भारतले पनि बढी महŒव दिनु स्वाभाविकै हो ।
 यो भ्रमणमा केही नयाँ सहमति हुन्छ कि सम्बन्ध सुधारको प्रयास मात्र हो ?
 सन् १९५० को असमान सन्धिको विषयले भ्रमणमा प्रवेश पाउला ?
 प्रबुद्ध समूह गठन हुँदा नेपाल–भारतका प्रमुखमा ओली र मोदी नै हुनुहुन्थ्यो । अहिले उहाँहरूकै पालामा उच्चस्तरीय भ्रमण भइरहेको छ । सही रूपमा सम्बन्ध सुधारको प्रयास हो कि, यो देखावटी मात्र हो ?
 यो भ्रमणबाट नेपाललाई के उपलब्धि होला ? भारतको के स्वार्थ देख्नुहुन्छ ?
सार्वभौमिक हिसाबबाट राष्ट्र समान हुन्छन्, चाहे ठूलो होस् कि सानो । त्यो समानतालाई व्यवहारमा उतार्नु प्रमुख हो । जुनबेला १९५० को सन्धिमा हामीले हस्ताक्षर ग¥यौँ, त्यतिबेला हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य पनि थिएनौँ । भारत र ब्रिटेनको मात्र यहाँ दबदबा थियो । खुला सिमानाले दुई देशबीच सहजता पनि आएको छ, चुनौती पनि त्यत्तिकै थपिदिएको छ । अब समस्या हल गर्ने उपाय दुवै देश मिलेर खोज्ने हो । दुवै देशको पारस्परिक हित र नागरिकको सुविधालाई ध्यान दिनु प्रमुख कुरा हो । सम्बन्धलाई नवीकरण गरेर आजको वास्तविकतामा ढाल्नु नै यो भ्रमणको मुख्य उपलब्धि हुन सक्ला । यसमा नेपाल र भारतको स्वार्थपूर्तिभन्दा पनि दुवै देशका जनताको आत्मसम्मानको संरक्षणमा केन्द्रित हुन सक्नुपर्छ ।
 नेपालका सरकार प्रमुखको पहिलो भ्रमण भारत नै होस् भन्ने भारत किन चाहन्छ ? यहाँको अनुभवले के भन्छ ?
 भारत–नेपालबाट मुख्यतः के चाहन्छ ? उसको स्वार्थ केमा देख्नुहुन्छ ?
 भ्रमणपछिको संयुक्त वक्तव्यको महŒव कति हुन्छ ? यसले के सन्देश दिने गर्छ ?
 अन्त्यमा, प्रधानमन्त्रीले नेपाल र नेपालीको हितका लागि अरू के–के विषय उठाउनु पर्ला ?
राष्ट्रहित, देशको प्रवद्र्धन, राष्ट्रियताको जगेर्ना, आर्थिक विकासमा साझेदारी नै प्रमुख विषय हुन् । यी विषयमा केन्द्रित भएर प्रधानमन्त्रीले कुरा गर्नुपर्छ । भारतले यसलाई कसरी हेर्छ, त्यो भ्रमणपछि थाहा होला । यसले नै दुई देशबीचको सम्बन्धलाई कोल्टे फेर्ने मद्दत गर्नेमा शङ्का छैन ।